बिर्सने बानी छ ? यसो गर्नुस् - Khabar Break | Khabar Break
लण्डन । कहिलेकाहीँ हामी बिर्सेकोमा गुनासो गर्छौं । कुनै सामान किन्न बजार जान्छौं तर गएपछि के किन्ने भनेर बिर्सन्छौं । मेहनेतका साथ पढेर जाँच दिन जान्छौं तर लेख्ने बेलामा आधा बिर्सन्छौं । कोही साथी धेरै दिनपछि भेट भयो भने उसको नाम नै बिर्सन्छौं । एउटा कोठाबाट उठेर अर्को कोठामा जान्छौंं तर के लिन गएको हो भन्ने बारेमा बिर्सन्छौं । बैज्ञानिकहरुले आफ्नो स्मरणशक्तिलाई राम्रो बनाउनका लागि वर्षौंदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अनुसन्धानका केही कुराहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । यी केही तरिकाले आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउन सकिने उनीहरुले जनाएका छन् :
पछाडि फर्केर हेर्नुस्
पुराना कुरा बिर्सेर अघि बढ्नु राम्रो भन्ने गरिए पनि बैज्ञानिकहरुले पुराना कुरा संझिएमा हाम्रो स्मरण शक्ति राम्रो हुने बताएका छन् । हालै भएको एक अनुसन्धानले देखाए अनुसार जब हामीले पुराना कुरा संझिन्छौं त्यसपछि नै हाम्रो स्मरण ताजा भएर जान्छ । त्यसैले पुराना कुरा संझने प्रयास गरौं ।
सामान किन्न जाँदा हामी अक्सर सामानको सूची बनाउने गर्छौ । तर, आफ्नो यादलाई राम्रो गर्ने हो भने सामानको सूची होइन त्यसको तस्बिर बनाउनु राम्रो हो । जसले यस्तो गर्छन् उनीहरुको स्मरण शक्ति राम्रो हुने बताइएको छ । यसो गर्दा डिमेशिया जस्तो रोगका बिरामीलाई पनि फाइदा गर्छ । उनीहरुको स्मरण शक्ति निकै राम्रो हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कुनै तस्बिर बनाएको बेलामा सो वस्तुको आकार प्रकारबारेमा गहिराइमा सोचिन्छ ।
उपयुक्त समयमा कसरत गर्नुस्
यो कुरा साबित भइसकेको छ कि नियमित रुपमा कसरत गरेमा स्मरण शक्ति बढ्छ । मसललाई नियमित रुपमा चलाएमा स्मरण शक्ति बढेको पाइएको छ । यद्यपि अनुसन्धानले यसका लागि समय भने सही हुनु जरुरी रहेको जनाएको छ । यसले आफ्नो स्मरणलाई राम्रो गर्न मद्यत गर्नेछ । यद्यपि त्यो समय कुन हुनु राम्रो हो भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरुले अझैपनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
हेरियट वाट युनिभर्सिटीका माइकेला डेवरले यसबारेमा गरेको अनुसन्धानमा कुनै मानिसले स्मरण गर्नासाथै तुरुन्तै ब्रेक लिएमा उसलाई सबै कुरा याद हुन्छ । त्यसैले तपाई पनि कुनै लेखपढपछि केही बेर शान्त भएर बस्नुस् । केही पनि नगर्नुस् । बसिरहनुस् वा ढल्किनुस् । यसले तपाईंको स्मरण शक्ति बढाउने मद्यत गर्नेछ ।
एक निन्द्रा सुत्नुस्
यदि तपाईंलाई माथि उल्लेख गरिएका स्मरण बढाउने तरिका अप्ठेरा लाग्छन् भने केही बेर सुत्नुस् । थुप्रै अनुसन्धानहरुले सुत्दा हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्ने देखाएका छन् । जो मानिस नियमित रुपले यसो गर्छन् उसले त्यसको फाइदा लिन सक्छन् । (बीबीसी)
संसारका खानीमा अब कति बाँकी होला सुन ?
प्रयोग भइसकेका लाखौँ कन्डम पखालेर फेरि बिक्री गरिँदै !